How To – Myanmar Leaders
April 15, 2017 November 28, 2018 denieldemon
၁။ မပြတ်မသားပြောဆိုသူကို မျက်လုံးတည့်တည်စိုက်ကြည့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ဖက်သားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောတဲ့အခါ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြန်မေးဖို့ဝန်လေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ မေးခွန်းတစ်ခုတည်းကို ထပ်တလဲလဲပြန်မေးနေမယ့်အစားတစ်ဖက်သူရဲ့မျက်လုံးကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်နေလိုက်ပါ။ ဒီအပြုအမူဟာ တစ်ဖက်သားကိုဖိအားပေးရာရောက်ပြီး ဖြေရှင်းထုတ်ဖို့တွန်းအားပေးပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၂။ အော်ဟစ်ပြောဆိုခံရချိန်မှာ တည်ငြိမ်မှုရှိပါ။ တည်ငြိမ်မှုရှိစွာနေနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သားက ဒေါသကြောင့်အော်ဟစ်ပြောဆိုနေချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကပါ သူနဲ့အတူမြောပါမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းရပါမယ်။ ဒေါသစိတ်ဟာ ကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက် နောင်တရစေပါတယ်။အရင်ဆုံးဒေါသထွက်သူဟာ အရင်ဆုံးတောင်းပန်ရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ ရန်လိုတိုက်ခိုက်တတ်သူနှင့် အနီးဆုံးမှာနေပါ။ ကိုယ်နဲ့မတည့်သူကို အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာတွေ့လို့ ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲစဉ်းစားရခက်နေပါသလား။ဘေးချင်းကပ်သာဝင်ထိုင်လိုက်ပါ။ မလှမ်းမကမ်းနေရာမှာသာရှိမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ကိုယ့်ကိုဦးတည်ပြီးအကြပ်ရိုက်စေမယ့်အခွင့်အရေးပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူ့ဘေးနားမှာ ထိုင်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ ။ သူလဲဒီလို ကသိကအောက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ သင့်ကိုရန်ရှာဖို့မေ့နေမှာပါ။ ၄။ လူချစ်လူခင်များချင်ရင် နာမည်တွေကိုမှတ်ထားပါ။ နာမည်အပြည့်အစုံမဟုတ်တောင် အဖြားစွတ်ခေါ်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းက တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပိုမိုရင်းနှီးစေမှာပါ။ ၅။ ပူပင်သောကတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ချရေးပါ။ ချရေးလိုက်ခြင်းက တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်ပြောဆိုလိုက်ရသလို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဒီလိုရင်ဖွင့်ချရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ အလုပ်တွေကို
April 11, 2017 November 28, 2018 denieldemon
၁။ ဈေးကွက်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဈေးကွက်ကို သေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အတွင်းကျကျ လေ့လာထားဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Google မှာရိုက်ရှာပြီး လေ့လာထားပါ။ ဈေးကွက်က အခြေအနေမကောင်းလို့လဲ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ အဲဒိအခြေအနေကို အသုံးချပြီး အကျိုးအမြတ်ရအောင် ဖန်တီးယူလို့ ရပါတယ်။ သင်တကယ် အလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ၂။ သေချာတဲ့ အမြတ်ငွေပမာဏကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားပါ။ ခြောက်လ တစ်ခါ အမြတ်ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်ကျန်ရမယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်တွက်ထားပါ။ အဲ့လို အမြတ်ငွေ တကယ်ရဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလဲ သေချာသိအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေ ထားပြီး တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနေရမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ Customer တွေကို အလေးထားပါ။
တိုးတက်ပြောင်းလဲချင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးပါ…
February 21, 2017 November 28, 2018 denieldemon
သင့်ကိုယ်သင် တကယ်အရေးပါတဲ့ မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးလေလေ၊ သင့်ဘဝက တိုးတက်လာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းပြန်မေးခြင်းဆိုတာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ လူအများစုဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းပြန်မေးပြီး ပိုကောင်းတဲ့ အဖြေတစ်ခု ရရှိအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးတွေကို မေးသင့်တာလဲ ? ယခုဖော်ပြမယ့် မေးခွန်း (၃) ခုဟာ သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မေးသင့်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံး မေးခွန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ☑ ” ငါ့ဘဝက ဘယ်နေရာ ရောက်နေတာလဲ ? “သင့်ရဲ့ လက်ရှိဘဝက ဘယ်နေရာကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာ သေချာသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူအများစုဟာ ကိုယ်တကယ် ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကို သေချာသိဖို့ မကြိုးစားကြပါဘူး။ နောင်တစ်ချိန်မှာ နောင်တမရချင်ရင် ဒီမေးခွန်းကို ရိုးသားစွာ ပြန်ဖြေဖို့
သင်မအောင်မြင်သေးတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
February 16, 2017 November 28, 2018 denieldemon
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ခံယူချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်တွေ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေမှာပါ။ ကိုယ်က ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုမျိုးကို လိုချင်တာလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင် ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို သေချာသိပြီဆိုရင်တော့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားအားထုတ်ရတော့မှာပါ။ သင်က အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုရင် ယခုဖော်ပြမယ့် အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ ဒီလို အကျင့်ဆိုးတချို့ ရှိနေသေးလို့ အောင်မြင်မှုမရရှိသေးတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဖယ်ရှားပါ။ မိမိကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အမှားတစ်ခုကို တာဝန်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြစ်တင်ပြီး အမြဲ ဆင်ခြေတွေ ပေးနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ ၂။ အဆိုးမြင်တတ်တဲ့ စိတ်ကို ပြင်လိုက်ပါ။ အရာရာက အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ အတွက် အမြဲတမ်း
စွန့်ဦးတီထွင်သမား တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ?
စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာနဲ့ လူတွေက အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ကြပါတယ်၊ စွန့်ဦးတီထွင်သမားဆိုတာ အခု ထလုပ်၊ အခု ချက်ချင်း အောင်မြင် သွားကြတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သူများတွေ မမြင်နိုင်တဲ့၊ တခြားသူတွေ မတွေးတဲ့ ကိစ္စ တွေကို တွေးပြီး ရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေပါ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သမား တစ်ယောက်လုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီလား? ဒါဆိုရင် သင့်ကိုသင် ပြန်မေးကြည့်ပါ၊ငါ အောက်က အချက်တွေကို လုပ်နိုင်ရဲ့လားလို့? 1 . ၀င်ငွေ Company ၀န်ထမ်းဘ၀မှာတော့ လကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ လစာဟာ ပုံမှန်ရရှိနေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ အမြတ်ကို ကြိုတွက်ထားလို့ မရပါဘူး၊ အရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရမှာတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေဟာ Company ၀န်ထမ်းလောက်တုန်းကတောင် မရှိတော့တွေကို
အောင်မြင်သူများ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ နံနက်ခင်း အလေ့အကျင့် (၆) ခု
February 8, 2017 November 28, 2018 denieldemon
စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာနဲ့ လူတွေက အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေကိုပဲ ပြေးမြင်ကြပါတယ်၊ စွန့်ဦးတီထွင်သမားဆိုတာ အခု ထလုပ်၊ အခု ချက်ချင်း အောင်မြင် သွားကြတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ သူများတွေ မမြင်နိုင်တဲ့၊ တခြားသူတွေ မတွေးတဲ့ ကိစ္စ တွေကို တွေးပြီး ရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေပါ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သမား တစ်ယောက်လုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီလား? ဒါဆိုရင် သင့်ကိုသင် ပြန်မေးကြည့်ပါ၊ ငါ အောက်က အချက်တွေကို လုပ်နိုင်ရဲ့လားလို့? 1 . ၀င်ငွေ Company ၀န်ထမ်းဘ၀မှာတော့ လကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ လစာဟာ ပုံမှန်ရရှိနေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ အမြတ်ကို ကြိုတွက်ထားလို့ မရပါဘူး၊ အရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရမှာတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေဟာ Company ၀န်ထမ်းလောက်တုန်းကတောင်
မနက်ခင်းမှာ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များ
February 5, 2017 November 28, 2018 denieldemon
အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရှိသင့်တဲ့ အချက် (၂၅) ချက်
February 3, 2017 denieldemon